Guri - Asylum in Finland
Boggan waxaad ka heleysaa macluumaad ku saabsan sida Finland looga codsado megengelyo
U imaanshaha Finland megangelyo-doonimo
Sidee Finland looga heli karaa megengelyo?
Finland go’aanka megangelyada waxaa markasta la sameeyaan iyadoo loo sababeynayo si shaqsi ah
Yaan xaq u laheyn megangelyada?
Finland waxey u hogaansantaa khad lamid ah kan wadamada kale ee Midowga Yurub
Isu keenista qoysku waxey quseeysaa oo kale qoyska rasmiga ah
Megangelyo waxaad ka codsan kartaa oo kaliya Finland- kama soo codsan kartid dibadda
Helitaanka go’aanka megangelyadu wuxuu qaataa inta badan waqti dheer
Megangelyo-doonku wuxuu xaq u leeyahay adeegyada aasaasiga ah
Waxaad heli doontaa kaalmo dhaqaale haddii aadan naftaada biilan karin
Kuwaan maanka geli
Safarka megangelyo-doonka ee Finland wuxuu noqon karaa mid qaali, nafsad ahaan adag islamarkaasna halis ah
Megangelyo doonis oo kaliya ma ahan habka lagu yimaado Finland. Waxaad ogolaanshaha degitaanka Finland ku codsan kartaa sababo shaqo ama waxbarasho
Xubnaha qoyskaadu wey codsan karaan ogolaansha degitaanka Finland, laakiin maya kahor inta aad codsigaada megangelyadaka heleyso go’aan ogolaansho ah
Godax ayaa ku soo laabtay Muqdishu, waxuuna hadda ku maamulaa shirkad qashinka aruuriyo
Godax wuxuu ahaan jirey macalinka kubbadda koleyga, wuxuuna ku noolaa magaalada yar ee Lohja oo ku taala waqooyiga Yurub. Dhowr sanadood ka hor wuxuu go'aansaday inuu dib ugu laabto Muqdisho, halkaaso uu ka tagay dagaalka sokeeye awgeeda. "Finland waxaan ku fikiri jirey, Lohja waa magaalo qurux badan, yar iyo nadiif ah. Waxaan go'aansaday inaan Muqdisho u nadiifiyo sida Lohja. " Soomaliya wuxuu ku aasaasay shirkad qashin ah, wuxuuna hadda shaqaaleeyaa qiyaas ahaan 300 shaqaale. Sii aqri
Leila waxay ka tagtay Finland si ay ganacsi uga bilaabato Soomaaliya
Leila waxay Finland timid 90'kii waxayna eheed qaxooti Soomaali ah. Laba sano ka hor waxay go'aansatay in ay dib u noqoto waddankeeda dhalashada si ay uga sameyso shirkad iibiso qalabyada soo jiido quwadda qoraxda. Hadda waxay shaqo siisaa qiyaas ahaan 30 dhallinyaro. Leila waxay tiri "Sababta aan ku soo noqday Soomaaliya waxaa weeye waxaan u maleynayaa in kani yahay ganacsi fiican, laakiin shaqo-siinta dhallinyarada xittaa waa muhiim." Qalabyadeeda soo jiido quwadda qoraxda waxay beeralayda ku caawiyaan inay biyaha ka soo dhuuqaan ceelasha si ay ku waraabiyaan beeraha. Sii aqri
codsiga megangelyda, dhaqaalaha nolosha, shaqo
To leave or not to leave? Documentary about people who decided to return from Europe back to Iraq. Sii aqri
”Ninku xittaa Finland xafaayadda waa beddelaa”
Finland waa dal ay horumarkiisa iyo heerka noloshiisuba ay ku saleysan yihiin sinnaan. Sida caadiga ah ninka iyo naagto waa shaqeeyaan hawsha gurigana waa wadaagaan. Sii aqri
qoys, dhaqaalaha nolosha, shaqo, waxbarasho
”Halkan derisku waa kala duwan yihiin”
Barashada dadka Finnishka ah iyo la sameysashada xiriir gaar ah inta badan waa kuwa gaabis ah. Inkastoo ay dadka Finnishka ah yihiin dad af gaaban, marwalba waa ka soo baxaan arrimaha lagu heshiiyo. Sii aqri
codsiga megangelyda, qoys
Waxaad isku dabbari kartaa waddan qaali ah, marka aad shaqo hesho
Finland waa dal fiican oo nadiif ah, kaas oo dadka oo dhan ay ku siman yihiin. Nolosha wanaagsan aasaaskeedu waa in qof kasta uu canshuur bixiyo islamarkaasna uu shaqadiisa uga qeybqaato hufnaanta bulshada. Sii aqri
qoys, dhaqaalaha nolosha, shaqo
Finland waa dal qurxoon oo qabow
Jiilaalka dheer ee Finland waa mid mugdi iyo baraf leh. Waxaa dheelitira xagaaga qurxoon oo xittaa saqda dhexe iftiinkiisa dabiiciga ah jaraa’id lagu aqrisan karo. Sii aqri
Aqoobta afku waa furaha Finnishnimada
Barashada afka Finnishku wey adkaan kartaa billowga hore. Habka ugu wanaagsan ee inta badan shaqo iyo saaxiibo looga helo Finland waa in afka la yaqaan. Sii aqri
Finland waxay mas’uul ka tahay magangelyo-doonka iyo qaxootida
Finland waxay cadaadiska soo-galootiga ka caawineysa Koonfurta Yurub iyo Turkiga waxayna aqbalaayaan kala gudbinta gudaha Yurub iyo dib u dejinta qaxootida iyo magangelyo-doonka dalalka Yurub (EU). Inkastoo ay ayagaba xubin ka yihiin Midowga Yurub, Finland waxay mas'uul ka noqonaysaa magangelyo-doonka iyo qaxootida, waxayna midnimo tusin doonaan dalalka saddexaad. Sii aqri
codsiga megangelyda, Finland waa caawisaa
Lacagta laga qaato Finland, maxey ku filan tahay?
Marka aad tahay megangelyo-doone waxaad heleysaa lacagta qaabilaadda, haddii aadan naftaada biilan karin. Ujeedada lacagta qaabilaaddu waa in laguu damaanadqaado dhaqaalaha nolosha ee aan laga maarmin mudada aad sugeyso go’aanka codsigaada megangelyada. Sii aqri
Dib u mideynta qoysku waxey ku dhowaad markasta u baahan tahay dhaqaalaha nolosha oo dammaanad-qaadan
Inta badan in qoyskaada loo ogolaado ogolaanshaha degitaanku waxey ku xiran tahay in uu ku soo galo dakhli ku filan nolosha qoyskaada ee Finland. Sii aqri
codsiga megangelyda, ogolaansha degitaanka, qoys
Codsiga xiriirka qoyska waxaa loo xareyn karaa si elekterikaal ah
Xubnaha qoyskaada ee xiriir qoys ku codsanaya ogolaanshaha degitaanka waa in ay ogolaanshaha degitaanka codsadaan kahor imaanshaha Finland. Codsiga waxaa lagu buuxsan karaa internetka. Si baaraandegista codsiga loo billaabo, waa in xubnaha qoyskaadu ay taganaan wakiilka dibadda ee Finand, kaas oo laga yaabo in uu ku yaalo wadanka ay deggan yihiin dibaddiisa. Sii aqri
Xaqa uu cunugga megangelyada doonka ah u leeyahay in qoyskiisa la keeno Finland
Kaddib go’aanka ogolaanshaha ah ee megangelyada, cunugga kayar 18 sano wuxuu xaq u leeyahay in uu codsado dib u mideynta qoyska. Sii aqri
codsiga megangelyda, qoys, nidaambka Dublin
Carruurta keligood yimaada Finland ee megangelyo-doonka ah waxeyn ku jiraan xaalad gaar ah
Megangelyo-doonyada 18 sano ka yar ee mas’uul la’aan yimaada Finland waxey helaan badbaadin gaar ah. Haddii loo baahdo, da’da waxaa lagu caddeynayaa baaritaan. Sii aqri
Bogga Asylum in Finland wuxuu macluumaad ku saabsan Finland u fidiyaa dadka megangelyo-doonka ah
Bogga shabakadda Asylum in Finland waxaa lagu ururiyay macluumaad ku saabsan Finland iyo hab-dhaqanka Finland ee megangelyo-doonka. Boggu wuxuu ku adeegaa Ingiriis, Carabi, Dari iyo Soomaali. Sii aqri
Megangelyo waad ka codsan kartaa Finland haddii aad heysato sababo cad oo aad uga cabsaneyso in laguugu cadaadiyo dalkaada hooyo ama dalka aad sida rasmiga ah u deggan tahay. Sii aqri
codsiga megangelyda, ogolaansha degitaanka
Codsi megangelyo oo kasta waxaa looga baaraandegayaa goonidiisa. Marka qiimeynta la sameynayo waxaa xisaabta lagu darayaa waxa aad sheegtay, caddeymaha aad soo bandhigtay, sababo gaar ah iyo caddeymaha ay ha’addu hesho. Sii aqri
Shuruud cad ayaa loo qarriray helitaanka megangelyada. Megangelyo laguma helayo faqrinimo darteed. Sidoo kale heer bulsheed liita ama shaqo la’aan ma ahan sababo lagu bixiyo megangelyada. Sii aqri
codsiga megangelyda, ogolaansha degitaanka, sharci
Sharciga ajnabiga ee Finland shuruudaha ku qoran ee lagu bixiyo megangelyada waxey la mid yihiin kuwa ku qoran heshiiska Geneva ee ay Finland iyo wadamada kale ee xubnaha ka ah Midowga Yurub qawlqaadeen. Sii aqri
codsiga megangelyda, sharci, nidaambka Dublin
Isu keenista qoysku waxey quseeysaa oo kaliya qoyska rasmiga ah
Xubnaha qoyskaadu waxey xiriir qoys ku codsan karaa ogolaanshaha degitaanka ee Finland marka aad adigu codsigaada megangelyada ka hesho go’aan ogolaansho ah kaddib. Sii aqri
codsiga megangelyda, ogolaansha degitaanka, qoys, dhaqaalaha nolosha, nidaambka Dublin
Waxaad ogolaanshaha degitaanka Finland ee ku saleysan xiriir qoys uga codsan kartaa si elekterikaal ah cinwaanka enterfinland.fi. Codsiga elekterikaalka ah wuxuu weli u baahan yahay in la tago safaaradda Finland. Marxaladda codsiga elekterikaalka ah waa in lagala socdaa adeegga elekterikaalka ah. Sii aqri
Haddii aad dooneyso in aad Finland ka codsato megangelyo, waa in aad u soo safartaa Finland. Suurtagal ma ahan in dibadda laga soo codsado megangelyo. Sii aqri
codsiga megangelyda, nidaambka Dublin
Marka aad codsiga megangelyada ku sameyso Finland waxaa laguugu hagayaa xarunta qaabilaadda oo aad ku sugeyso ka baaraandegista codsigaada. Shaqada baaritaanka iyo ka baaraandegista codsigu waxey qaateen bilooyin badan. Sii aqri
Finland kama jirto damaanadqaad megangelyo- u diyaargarow sidoo kale go’aan diidmo ah
Sanadihii ugu danbeeyay dad badan ayaaa Yurub u soo galay safar halis ah iyagoo aaminsan in ay helayaan megangelyo iyo shaqo, dhaqaale lacageed fiican iyo in marka dambe uu qoysku u imaanayo. Qaar badan ayaa qalbijabay markii wixii ay filayaan ay rumoobi weysay. Sii aqri
codsiga megangelyda, ogolaansha degitaanka, qoys, shaqo
Cuntada, deegaanka iyo adeegyadu waa ku qaali Finland marka la barbardhigo wadamo badan. Isbarbardhigga cuntada Finland waxey wadamada Yurub uga jirtaa kuwa ugu horeeya. Sii aqri
Safarka megangelyo-doonka ee Finland wuxuu noqon karaa mid qaal ahi, nafsad ahaan adag islamarkaasna halis ah
Wadada megangelyo-doonku ku imaanayo Finland waa mid dheer oo inta badanna qaali ah. Safarada iyo ka gudbinta xuduudaha ee sharci darada ah waa kuwa inta badan jir ahaan iyo nafsad ahaanba culus, sababtoo ah waxaa la xiriira khataro waaweyn. Sii aqri
Adeegyada aad leedahay adigoo megangelyo-doon ah waxey ku saleysan yihiin sharci. Adeegyada aasaasiga ah ee aan laga maarmin waxaa qaabilsan xarunta qaabilaadda ee aad deggan tahay mudada ka baaraandegista codsigaada megangelyada. Sii aqri
codsiga megangelyda, sharci, dhaqaalaha nolosha, shaqo, waxbarasho
Waa adagtahay in Finland lagu noolaado iyadoo aan la heysan ogolaanshaha degitaanka
Megangelo-doone ahaan waxaa kaliya oo aad xaq u leedahay in aad joogto Finland adigoo aan heysan fiiso ama ogolaanshaha degitaanka illaa iyo inta aad codsigaada megangelyada ka heleyso go’aan. Sii aqri
codsiga megangelyda, ogolaansha degitaanka, qoys, dhaqaalaha nolosha, shaqo
Megangelyo doonis oo kaliya ma ahan habka lagu yimaado Finland. Waxaad ogolaanshaha degitaanka Finland ku codsan kartaa sababo shaqo ama waxbarasho.
Codsasho megangelyo ma ahan habka kaliya ee lagu yimaado Finland. Sii aqri
codsiga megangelyda, ogolaansha degitaanka, shaqo, waxbarasho
ERAYADA FURAHA AH
Finland waa caawisaa
Finland waxey ku kaalmeysaa adduunyada